Ime mkpebi gị dị oke mkpa n'oge ndụ gị, ma ọ pụkwara ịbụ ihe mgbagwoju anya.
Otu esi eme ka o doo anya na kwaghari na ntughari nke nwere ihe omuma.
Onye nwere ike ime ka obi ghara iru ya ala mgbe o na-eme mkpebi.
Want chọrọ ịmaliteghachi, ma ị ga-aga site na? I nwere okwu ohuru, mana kedu ka esi ama ma ahihia ahihia ndu ebe ozo? Ọ bụrụ na m asị ee ma m hiere ụzọ? Ya mere, anyị na-amụ ihe omume niile, anyị na-anwa ịkọwapụta uru na ọghọm, n'ikpeazụ akụkụ a nke amaghị ama na-eto ngwa ngwa dị ka ọnụọgụ nke ihe omume.
Olee otu esi eme nhọrọ ziri ezi? Kedu ka m ga-esi mezuo mkpebi n'emeghị ihe kpatara ya? N'ikpeazụ, ọ gaghị abụ ihe amamihe karịa ime ihe ọ bụla?
Vidiyo a ga-akụziri gị ihe dị mkpa iji bute ndụ gị: ikike ịme nhọrọ gị!
Emela ka ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, na-achịkwa ndụ gị, nhọrọ ahụ ga-abụ ezigbo enyi gị.
Na vidiyo a, ị ga-ahụ ntụziaka na ngwọta nke ga - eme ka ịme mkpebi dị mfe karị, ya na obi dị jụụ ..., na ihe niile, naanị 5 isi:
1) Nhọrọ : ndị dị gị n'aka, ọtụtụ n'ime ha ọbụna mgbe ị ga - ekpebi mgbe ị ga - eme mkpebi!
2) A ike : nguzozi ogugu na ezi uche!
3) Obi Ụtọ : nnukwu mmanụ ọkụ ... mkpebi a ọ ga-eme m obi ụtọ?
GỤỌ Mee ka ogo gị dịkwuo mma iji mezuo ihe mgbaru ọsọ gị.
4) Obiọma : ige ndị gbara gị gburugburu nwere ike ịrụ ọrụ ebube na nhọrọ gị.
5) Ike gi di oke mkpa : buru n'uche ahụ gị na mmetụta gị gbasara nhọrọ ndị a.
Ugbu a ị nwere mkpịsị ugodi iji rụọ ọrụ na mkpebi gị, gịnị ka anyị na-eme?
Ime Mkpebi-Ụzọ Isi Mee Nhọrọ Ziri Ezi? Mee 11th, 2018Tranquillus
gara agaTop Top Resources Iji Mụọ English
-esonụNtuziaka Nduzi Kasị Mma Iji Mụta Spanish
Nchegbu, weghachite ma kwupụta mmetụta gị n'ụzọ dị mma.